Indawo Yokutshuza Emagagasini: Hamba uye ebhishi! - I-Airbnb
Indawo Yokutshuza Emagagasini: Hamba uye ebhishi!
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Noah
U-Noah Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa ekhaya lami le-quirky Ocean Beach! (Lokho kungu-"OB" ngolimi lwasendaweni!) Noma ngabe iluphi uhambo lwakho, uzothola ukuthula namavayibhu amahle lapha. Indawo ilungile - sisesangweni lendawo kanye namabhulokhi amathathu nje ukusuka ogwini lolwandle!
Indlu yikhaya elincane lomndeni owodwa kusukela ngawo-1920, indlu yasebhishi ye-OB yasekuqaleni! Kunamakamelo amathathu ekhaya - elinye lakho, elinye lababungazi bakho (mina, isithandwa sami, uMichele, kanye nenja yethu enobungane ye-goldendoodle, i-Chewy!), kanti elinye lesinye isivakashi se-AirBnB. Sonke sabelana ngezindawo ezisetshenziswa abantu bonke kanye negumbi lokugezela, elihlanzwa njalo lapho isivakashi siphuma. Kunenqwaba yendawo yokupaka yamahhala etholakalayo, kuhlanganise nendawo eyodwa engekho emgwaqweni emgwaqeni wethu. Kukhona igceke elikhulu elingemuva elinompheme wamapulangwe wasemaphandleni, isiteshi sokuhlanza, isihlahla esisawolintshi, ingadi yemifino, kanye nenqwaba yezinyoni! Okuhle kunakho konke? Amabhodi okutshuza aluhlaza okwesibhakabhaka AKHULULEKILE ukuwasebenzisa!
Ikamelo lakho linombhede omkhulu omuhle kanye nekhabethe lokugcina izinto zakho. Imicamelo emihle namathawula okugeza, izingubo ezengeziwe, i-WiFi enejubane elikhulu, kanye ne-carafe yamanzi kuhlinzekwa ukuze ukujabulele! Unamashalofu akho okugcina ukudla esiqandisini nasendaweni yokugcina ukudla. Ikhishi libhalwe kahle ukukusiza ukuthi uthole lokho okudingayo ukuze upheke ukudla ekhaya! Uzoba nesikhiye esisodwa sendlu kanye nesisodwa sekamelo lakho lokulala.
Kungenzeka singakwazi ukuhlangana njengoba wonke umuntu enesenzakalo esihlukile, kodwa ungase futhi ube nethuba lokuhlangana nabantu abathile abapholile! (Umnyango ngamunye wekamelo lesivakashi unethegi yegama.) Igceke elingemuva negumbi elihlanganyelwayo linikeza amathuba obumfihlo ngisho nangaphandle kwekamelo lakho uma yilokho okufisayo.
4.91 out of 5 stars from 378 reviews
4.91 · 378 okushiwo abanye
Ufuna ukubloma? Kuyangijabulisa lokho! Yebo, UMSEBENZI wami ungangiphazamisa - ngidinga ukulala! Noma kunjalo, uma unomphakathi futhi ufuna ukungazi, okumele ukwenze nje ukuza ulenga ekamelweni elikhulu noma ngemuva kwendlu! Njengesivakashi sami, ngiyenqaba ukuhlonipha ubumfihlo bakho. Kodwa ngesikhathi sokuhlala kwakho, ngikuthatha njengomuntu ohlala naye futhi ngikwamukela endleleni yokuphila ye-SoCal!
Ufuna ukubloma? Kuyangijabulisa lokho! Yebo, UMSEBENZI wami ungangiphazamisa - ngidinga ukulala! Noma kunjalo, uma unomphakathi futhi ufuna ukungazi, okumele ukwenze nje ukuza ulen…
UNoah Ungumbungazi ovelele